घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » पर्यटन » यो जाम्बिया होइन, यो जिम्बावे होइन - यो अफ्रीका हो
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • मान्छे • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • जाम्बिया ब्रेकिंग न्यूज • जिम्बाब्वे ब्रेकिंग न्यूज
जुन 27, 2017
अफ्रिका पर्यटनका लागि सम्मानित मानिस भनेर चिनिने जिम्बावेका पर्यटनमन्त्री, माननीय डा। वाल्टर मेजेम्बीले भिक्टोरिया फल्समा यो निबन्ध साझा गरे। यो एक उच्च माध्यमिक विद्यार्थीले गरेका थिए जसको मन्त्रीले भारतको नयाँ दिल्लीमा फेब्रुअरी २०१ 2017 मा UNWTO का महासचिव हुने अभियानमा भाग लिएका थिए। यो शीर्षक हो, "अफ्रीकाको महिमा” कथा महाद्वीपको सबैभन्दा ठूलो पर्यटन आकर्षणको बारेमा हो - जिम्बाब्वे र जाम्बियाको सिमानामा रहेको शक्तिशाली भिक्टोरिया फल्स।
केही झरनाहरु को पहिचान को बारे मा विवाद हुनेछ। ठिक छ, म तपाईंलाई बताउँछु - यो जाम्बियन होइन। यो जिम्बावे होइन। यो अफ्रिकी हो।
भिक्टोरिया फल्स महाद्वीपको मुख्य आकर्षण हो। जाम्बिया र जिम्बावे दुबैमा अवस्थित यो एक साझा चिनारी रहेको छ र दुबै देशहरूको क्षेत्र कभर गर्दछ, यो पुलले जाम्बिया र जिम्बावे बीचको सिमाना मार्क गर्दछ।
भिक्टोरिया फल्स अफ्रिकाको गर्व हो, महाद्वीप विश्वको सबैभन्दा ठूलो झरना होस्टिंग। मेरो लागि, सब भन्दा ठूलो झरना कहिल्यै परिभाषित गरिएको थिएन, र म यसलाई हेर्नको चाहना गर्दै थिएँ जब मैले भेटे कि भिक्टोरिया फल्स भनेर चिनिने कुनै चीज अस्तित्वमा थियो। यो नाम आफै नै यति भव्य देखिन्छ, यसको संस्थापक - डेभिड लिभिंगस्टोनद्वारा महारानी भिक्टोरियाको नामाकरण भएको यसको उत्पत्तिसँग साँचो हो। मैले उसको बारेमा पूरै पढेको थिएँ, र ओह, जब म दुई सफा-प्याक सुटकेसहरू, डिजाइनर सूर्य टोपी, र खानेकुराले भरिएको एउटा झोलाको साथ यात्रा गर्दै थिएँ, केवल फल्स आफैले पत्ता लगाउनको लागि, त्यस व्यक्तिले वर्षौं गहिराइ सहे। अफ्रिकी झाडीमा असहजता, मानिस खाइरहेका गोहीहरूसित लडेर सिंहले टोके र उनको पाखुरा गुमायो, जुन सबैले संसारको लागि फल्स पत्ता लगाए।
र अब, विश्व यसको सुन्दरता मा प्रत्येक वर्ष revels।
हाई स्कूलको विद्यार्थी उदिता बजाज, जसले मन्त्री मेजेम्बीलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा भेट्यो - यस लेखका लेखक
झरनाहरू प्रकृतिको ट्रेलको मुटुमा गहिरो कफनिएका छन्। ओह, र यो लामो बाटो सम्म पछाडि पट्टि लाग्न को लागी छ - विशेष गरी यदि तपाईं भारत बाट सबै बाटो आउँदै हुनुहुन्छ, म जस्तो।
म झूट बोल्दिन। ,,4,500०० माईल भन्दा बढी यात्रा भारी थकान भन्दा कम थिएन। कम्तिमा ११ घण्टा हवाईजहाजमा गुज्र्यो - दिल्ली देखि लुसाका, त्यसपछि हरारे, र फल्स-लाई कम्तीमा भनिए पनि - मलाई दुखाइ दिइयो। र पक्कै पनि, म हाम्रो होटेलमा जान र ओछ्यानमा आफूलाई डुबाउन पर्न सक्दिनथें, शराबी गद्दामा डुब्न सक्थें वा पोखरीको नजिकै आराम गर्न सक्थें वा बिहानको घाममा हात पिएर ... ओह, र सनथ वास्तवमै हुने थियो। राम्रो ... भिक्टोरिया फल्स एक दिन पछि पर्न सक्छ, यो सक्दैन? होईन, जब परिवारसँग अन्य योजनाहरू छन्।
मात्र भनौं - फल्स नजिकै असंख्य होटेल मध्ये एकमा आराम र आनन्द लिन म मना गर्‍यो जुन मैले सबैभन्दा उत्कटताले छनौट गरें। र, ओह, यस स्थानमा पर्यटन बृद्धि गर्नमा देशले अद्भुत काम गरेको छैन!
त्यहाँ छनौट गर्न असंख्य होटलहरू छन्, प्रत्येकको आफ्नै आकर्षण र झरनाको सौन्दर्यको प्रतिबिम्ब सहित। बाटोनका गेस्ट लज, एलिफन्ट क्याम्प, भिक्टोरिया फल्स होटल - प्रत्येकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई उत्तम अनुभव प्रदान गर्दछ, यो स्टाफ, एम्बियन्स, कोठा - सबै कुराको हिसाबले होस्! र हो, किंग्डम होटेलमा मेरो बसाई कम थिएन। एउटा चीज जसले किंग्डम होटेललाई बाँकीबाट अलग गर्‍यो उसको वातावरण थियो। यो जीवन्त थियो। यो उत्साहित थियो। र यसको सानो झरना, र आदिवासी-जस्तो सजावटको साथ, यसले यसलाई अफ्रिकाको वास्तविक सारमा समात्यो - यी सबै आफैमा।
हामी हाम्रो उडान अवतरण गरेको ठीक तीन घण्टा पछि छाड्यौं। तातो पेनकेक्स, चकलेट वाफल्स र अन्य सबै स्वादिष्ट पदार्थहरूमा विलासी ढor्गले हिर्काउने मेरो सपना, किंग्डम होटेलमा ब्रेकफास्टमा दिइन्छ र नाउ भित्र गयो किनकि मलाई दुई-र- a- भन्दा कममा केही ह्यास ब्राउन र मकैको स्टू डुबाउन बाध्य पारियो। आधा मिनेट, केवल दुई किलोमिटर पैदल पैदल यात्राको लागि झरना सम्म।
मेरा खुट्टाहरू पक्कै खुशी भएनन्, न त मेरा आँखा नै थिए। म केही पनि बीच बीचमा एक निराश मार्गमा थिए। बाँझो, उजाड भूमि जहाँसम्म आँखाले देख्न सक्छ। त्यहाँ दुबै किनारमा बालुवा रहेको हुनसक्छ दूरीमा सायद एउटा अनौंठो रूखको साथ। चाँडै नै मेरो मुटु छोडियो र मैले आफ्नो आँखा बन्द गरें, यो सपनाबाट बाहिर आउन चाहान्छु। तर जब मैले ती खोलें, मैले आफूलाई गहिरो भित्र डुबाइन।
पातहरू चहकिलो, तर पक्का टोनमा फुसफुसे। एक नरम सीटी ... पछि असंख्य मेघ गर्जन सहित। हावाको भुमरीले कुनै माटो र मैला पोखाएन। यो केवल अभिवादन थियो, मानवलाई स्वागत गर्ने प्राकृतिक तरिका। यो शान्तिको सम्झौता, एक सम्झौता र प्रकृतिसँग हस्तक्षेप नगर्न अनुरोध थियो। हामीले नम्रतापूर्वक यसलाई लिनुभयो र पहाड र चट्टानहरूमा अगाडि बढ्यौं। ढु stone्गाको बाटो भिजेको थियो, साना पातहरूको साथ थोप्ले। पानी पिउने पानीको भारी पानाको आवाज स्पष्ट र चर्को थियो। झरना निकट थियो, र म पहिले नै थकित भएको कारण, म फुर्सदको लागि हिंड्न सक्दिन जब म यो मेरो सपना बाँच्ने करीव थिएँ।
म यात्री हुँ। मैले विश्वभरि धेरै पर्यटक गन्तव्यहरुमा यात्रा गरिसकेको छु, र प्रत्येक एक मानव निर्मित संरचना, प्रत्यारोपित झरना र मूर्तिहरु, टिकट काउन्टरहरु, पर्यटकहरु को हडबडी, वाकी-टोकिज को उपयोग, कम्प्युटर - सबै बनाउन संग सजिलो छ। यो सुविधाजनक र आकर्षक छ। यसलाई सुन्दर बनाउन। तर यहाँ, पूर्ण एकान्तमा, न्यूनतम मानव हस्तक्षेपको साथ, यसलाई सुन्दर बनाउनु आवश्यक छैन, किनकि यो आफैमा सुन्दर छ।
मेरो सबै थकान, मेरो सबै जलनको पानी धोइदियो जब मैले झरनामा आँखा राखे। लिभिंगस्टोन सही थियो - "दृश्यहरू यत्ति मनमोहक दृश्यहरू उनीहरूको उडानमा स्वर्गदूतहरूले हेरेका थिए।"
म एक चट्टानको किनारमा उभिएँ, मेरो रेनकोटमा काँपे। कुहिरोले मलाई यस्तो नाजुक घुमाइलोमा डुबायो मानौं कि मलाई अरु सांसारिक क्षेत्रको लागि पढाइरहेछ। त्यसैले, मैले अन्ततः झरनाहरू हेर्नको लागि यसलाई खाली हुनको लागि मैले कुर्दैं थिएँ। एक मिनेट बित्यो। त्यसपछि दुई। तर अगाडिको आकाशले मैले हेर्न चाहेको उत्पादन गरेन। यसको सट्टा, चम्किरहेको इन्द्रेणीहरू एक जस्तो देखाए, परीजहरूमा जस्तो ती देखिन्थ्यो। यो यथार्थबाट टाढा थियो। तेह्र इन्द्रेणीहरू अस्तित्वमा टल्किए, मानौं प्राकृतिक संसारमा हाम्रो प्रवेश द्वार हो। र कुहिरो खाली भएपछि, म लडे। यस मनमोहक reverie को गहिराई मा तल। र म अस्वीकार गर्दिन - म शब्दहरूको लागि पूर्ण घाटामा थिएँ।
भिक्टोरिया फल्स उच्चतम झरना होईन, न त यो फराकिलो झरना हो, तर ,,5,604 फिटको उचाई र 354 XNUMX combined फिटको संयुक्त चौडाइमा आधारित, यो "सबैभन्दा ठूलो झरना हो।" भिक्टोरिया फल्स उत्तर अमेरिकाको नायाग्रा फल्सको भन्दा लगभग दुई गुणा उचाई र यसको घोडो फल्सको चौडाई भन्दा दोब्बर छ। झरने पानीको सब भन्दा ठूलो पाना गठन हुन्छ जब तेज बहाउँदो जमबेज़ी नदी एकल ठाडो खण्डमा ट्रान्सभर्स कैसममा डुब्दछ, जब झरना पूर्ण चौडाईमा पुग्छ।
सबैलाई जो दावी गर्छन् कि नायाग्रा फल्स "राम्रो" छ - कसरी? अब, मैले दुबै देखेको छु र भिक्टोरिया फल्स जत्तिको तेजस्वी छ। तथ्या .्कले फरक पार्दैन। यो भावना हो कि यो तपाईं मा पैदा गर्छ कि गर्दछ। यो भगवानको क्षेत्र प्रकृतिको मुटुमा अवस्थित छ, बाहिर संसारको दलदलबाट टाढा। र त्यस्तो युगमा, यस्तो सुन्दरता, त्यस्तो शान्ति पाउन गाह्रो छ। म त्यहाँ केही पाउन पाउँदा भाग्यशाली थिएँ र पानीको झरिरहेको ठूलो गहिराइ र शान्तिमय दृश्यको साथ, भिजेको पृथ्वीको गन्ध र पानीको स्प्रि ,्ग्स, मिठो र ताजा स्वाद र धुवाँको स्पर्शले केही राम्रो हुन सक्दैन।
मानौं। डा। वाल्टर मेजेम्बी
दिनभरि आराम र फल्सको प्रशंसा गर्ने मेरो उत्कट इच्छा परिवार द्वारा एकदमै चकनाचूर भयो। तिनीहरूको योजना पहाडी (र केही हदसम्म अपमानजनक) थियो। यो केवल दिउँसो थियो, त्यसैले हामीले यहाँ योजना गरेका गतिविधिहरूको पूरा दिन लियौं! भिक्टोरिया फल्ससँग धेरै गतिविधिहरू छन्! यदि तपाईं अन्तिम साहसिक कार्यको लागि हुनुहुन्छ भने - झरनामा पौडी खेल्ने बारेमा कसरी? वर्षौंको क्षरणको क्रममा, धेरै चट्टानहरू फल्सको किनारमा गठन भयो, जसमध्ये एक दियाबलको पोखरी हो। मध्य अगष्टदेखि जनवरीसम्म मात्र पानी खुला हुन्छ जब पानीको स्तर कम हुन्छ, यो अन्तिम इन्फिनिटी पूल मात्र डन्टलेसहरूका लागि हुन्छ। पोखरीमा नदीको बलले तपाईंलाई किनारमा पु .्याउँछ किनकि ढु rock्गाको ओठले तपाईंलाई रोकिदिन्छ जब जमबेज़ीको बग्ने पानीले चट्टानहरूमाथि प्रहार गर्दछ। अवश्य पनि, त्यहाँ तपाइँको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न परिचरहरू छन्। हाम्रो मार्गनिर्देशनले यो अद्भुत गतिविधि हाम्रो लागि सुझाव दियो। मैले इन्कार गरें, धेरै निश्चित छ कि मसँग मृत्युको इच्छा थिएन। यसको सट्टामा, म एक आर्ट सफारीको लागि बसे। यो अफ्रिका हो, त्यसोभए किन छैन? केवल एक जनाले वन्यजन्तुहरू पत्ता लगाउँदछ - अफ्रिकाको सार - जसमा हात्तीहरू, भैंसहरू, हिप्पोपोटमस, बाबुनहरू, बाँदरहरू, चीताहरू… केही नाम मात्र समावेश छन्, तर यसले स्थानीय संस्कृतिको अनुभव र अवशोषण पनि प्राप्त गर्दछ। गाउँ कला सफारी मा, एक Mpisi गाउँ मा स्थानीय Ndebele संस्कृति मा एक अंतर्दृष्टि हुन्छ। यो साम्प्रदायिक बस्ने ठाउँ अफ्रिकाको सांस्कृतिक रूपमा धनी जीवनशैलीको लागि सही छ। अन्तर्क्रियात्मक कार्यशालाहरू, निजी ट्यूटर, र एक विशेष परम्परागत खाना वास्तवमै यस समृद्ध अनुभव लाई जीवन्त पार्नुहोस्! र फेरि फेरी, मैले अनुभव गरें कि यो शर्मिन जस्तो कस्तो छ, एक अनुभूति तपाईले यस समयमा सायद अनुभव गर्न सक्नुहुन्न।
यो निर्ममता छिट्टै दिन को केहि गतिविधिहरु मा हाम्रो पारस्परिक सम्झौता संग रोममा परिवर्तन भयो। सिमानामा पैदल हिड्ने समय भयो, जहाँ ब्रिज स्विंग र बन्जी जम्प हाम्रो पर्खाइमा थिए! भाग्य प्रलोभन गर्न चाहनुहुन्छ? मानव पेंडुलम बन्नुहुन्छ? तपाईंको गहन इच्छाहरू निश्चित रूपले यहाँ पूरा हुनेछ। मेरा पक्कै पनि थिए किनकि मैले मेरा सबै डरहरू पछाडि धकेलेँ र डुबकी लिएँ। र म त्यो दिन पछि हरेक दिन कामना गर्दछु, कि म एक पटक फेरि महसुस गरेको हरेक घण्टामा मैले महसुस गरेको हरेक भावनालाई बाँच्न सकें।
झरनामा बटोन्का घाटी एउटा पुल स्विंग गर्न सक्ने उत्तम स्थान हो। यो -० मिटरको फ्रिफलले तपाईंलाई एड्रेनालाईन राश दिन्छ जसरी तपाईं विशाल चापमा स्विंग गर्दा सुन्दर दृश्यहरू लिँदै हुनुहुन्छ। म यसको लागि बसे, र म खुशी छु कि मैले गरे। यो मेरो सम्पूर्ण जीवनमा सब भन्दा राम्रो अनुभव थियो, र यो धेरै भनिरहेको छ, किनकि म एक यात्री हुँ भनेर। अर्कोतर्फ बन्जी जम्पले मेरो नसालाई चकनाचूर पारे जब मैले त्यो भाइ १११ मिटर वजनको भारबाट ओर्लिएको देखे। म उनको कष्टहरु सुन्न सक्छु। उनको आनन्द प्रस्ट थियो। हामी दुबै गतिविधिहरू यसको लागि लायक थिए। मलाई थाहा छ कि यो गर्नु भन्दा पहिले मेरो दिमागमा लाखौं विचारहरू थिए। के हुनेछ? के म आफैलाई चोट पुर्‍याउँछु? म मर्न सक्छु? यो पुलबाट जम्पिनु सजिलो छैन। तर मेरो झिझक स्वतन्त्रतामा परिणत भयो किनकि मैले हाम फालेको थिए। यसले मलाई चिच्यायो। यसले मलाई हाँस्न बनायो। यसले मलाई जीवित महसुस गरायो।
त्यसो भए, साँझमा, हामीले उपचार प्राप्त गर्यौं जुन हामीले धेरै चाह्यौं। भिक्टोरिया फल्स सनसेट क्रूज। जामबेजी एक्सप्लोरर क्रूज कम्पनीले हामीलाई सवारीको लागि साँच्चै लैजान्थ्यो जब हामी माथिबाट अफ्रिकी सूर्यतिर डूबिरहेका थियौं। हैन - यो केवल रमाईलो छैन। यो पुनर्जीवित छ। रातो आकाश यसको सबै महिमामा चम्किरहेको छ, क्रूजमा बसिरहेको बेला, तपाईं साँझको रमाइलोमा रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ जंगली बथानहरू तिनीहरूको अन्तिम पेयको लागि नदीको किनारमा बग्दैछन्, र सबै प्रकारका चराका बगालहरू पानीको रेखामा स्किम्, गर्दै, ढिलो बढेको देख्न सक्छन्। बाटो दूर तपाईं मर्न को लागी आगो को मर्ने बल माथि। र सूर्यको गर्भको भुँडीमा घुसेपछि कुराकाओ गिलास हातमा, म आफ्नो परिवारको साथ डेक पलंगमा बसें र विश्वको सब भन्दा सुन्दर ठाउँहरू मध्येको एउटा सम्झनामा आनन्दित भएँ - "अफ्रिकाको क्राउनि Gl ग्लोरी:" भिक्टोरिया फल्स।